Ma dalabkii guur ee ugu cajiibsanaa abid baa midkan? - BBC News Somali
13 Jannaayo 2020
Lahaanshaha sawirka Kayla Coombs
Bal sawiro - Waxaad ku jirtaa shineemo, waxaadna daawaneysaa filimka aad ugu jeceshahay, laakiin jilayada waxay kuula muuqdaan dad aad garaneyso iyo saaxiibkaaga.
Wuxuu kireystay qolka Shineemo oo uu ka buuxiyay qoyska iyo saaxiibadiisa, wuxuu u daaray filim uu si lama filaan ah uga soo dhex muuqday uuna guurka ku weydiistay, waxayna ugu jawaabtay "haa".
Ka gudub Instagram daabacaad W.Q yours_true_lee
Dhammaadka Instagram daabacaadda qore yours_true_lee
"Markii ugu horeysay ee Lee uu iisoo diray farriinta email-ka, uuna ii sheegay fikradda dalabka guurka ee Saaxiibtiisa, waxaan u qaatay in uu ula jeedo qaab filim ah oo kale," ayey tiri Kayla Coombs oo u dhalatay Australia, aflaantana sameysa, taas oo Lee lix bilood kala shaqeyneysay dib u habeynta filim la sameeyay 1959-kii.
Kayla wuxuu sheegay in dhowr bilood ka dib ay ku wadahadlayeen qadka Skype, "Waxay xaqiiqdii ahayd arrin aad loogu qanco in muuqaalka laga dhex arkay in Sthuthi ay wax badan ka fahamtay waxyaabaha yar ee aan sameynay".
"Tan waxay ahayd wixii ugu weynaa ee si shakhsiyadeed aan u dalbaday ee aan weligeey sameeyay, Wax aad u fiican ayey ahayd - waan ku faraxsanahay in aan qeyb ka ahaa," ayey tiri Kayla.
Image caption Kayla ayaa sameysay filimka kartoonka ah ee guur-dalbashada lagu jilay
Dalabaadka aroosyada waxay u muuqdaan kuwo sii ballaaranaya, oo aad u wanaagsan bulshadana lala wadaago - Iyadoo YouTube ay ka buuxaan dad raadinaya su'aasha qaaliga ah ee ka soo hor muuqata ee guurka ah.
Haweeney riyo ku liqday faraantigeeda
Markasta qasab ma ahan in malaayiin qof ay daawato - Adam King nin lagu magacabo wuxuu saaxiibkiisa guur ku weydiistay tareen buuxa dhexdiisa, sannadkii 2011, iyadoo dad badan ay u heesayeen una sacbinayeen.
"Waxaa hubal ah in culeys badan ay leedahay. Shaqsi ahaan, ma jecli in meel bannaan oo dad badan joogaan guur la igu weydiisto, waxayna ila tahay in dad badan ay ceeb moodi lahaayeen.
"Dadka meelaha l isugu yimaada sidaa ku sameeya waa in ay is weydiiyaan - Ma waxaad u sameyneysaa adiga dartaa mise qofka aad guurka weydiisaneyso aawadii?"
Yoshihiro Hattori: Ardeygii garaacay albaabkii qaldanaa ee la dilay
21 Oktoobar 2019
16 Sebtembar 2019